POND'SFlawless White Whitening Expert BB+ Cream - 25g | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
POND'S Flawless White Whitening Expert BB+ Cream - 25g
All of my family members have been using Pond's for years. Although my mother is 55 years old, her skin looks the same. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
POND's ကထုတ်တဲ့ BB Cream လေးက အသားအရေကို အမှန်တကယ် ဖြူစင်ဝင်းပစေတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
သုံးပြီးမကြာခင်ဘဲ သိသိသာသာ မျက်နှာလေးဖြူ လာတယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Pond အမှတ်တံဆိပ် Flawless White Whitening Expert BB+ Cream သည် UVA နှင့် UVB ဒဏ်မှကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေကို ဝင်းပချောမွေ့စေသည့် ဖောင်ဒေးရှင်းခရင်မ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မျက်နှာပေါ်ရှိ အစက်အပြောက်များကို ဖုံးကွယ်ထားပေးပြီး အသားအရေအတွင်းပိုင်းသို့ စိမ့်ဝင်စေကာ မျက်နှာပေါ်ရှိ အစက်အပြောက်များနှင့် အညိုကွက်များမှေးမှိန်စေပါသည်။ Pond အမှတ်တံဆိပ် Flawless White Whitening Expert BB+ Cream က အသားအရေကို အပြစ်အနာအဆာများ ကင်းစင်စေပြီး ပိုမိုဖြူစင်လာစေနိုင်သည်။ GenActiv ဖော်မြူလာနှင့် Vitamin B3, Vitamin E, Allatoin နှင့် Super Optics တို့ပါဝင်သည့်အတွက် ၇ရက်အတွင်း အသားအရေကို ညီညာလှပစေပြီး အမည်းစက်များလျော့ပါးစေပါသည်။ Vitamin B3 က Melanin ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သည်။ Vitamin E က အသားအရေကို ညိုမည်းစေသည့် free radical များ၏ အစွမ်းသတ္တိကို ပြယ်ပျောက်စေသည်။ Allantoin က အသားအရောင်ကို ပိုမိုလှပစေသည်။ Powerful optics system ပါဝင်သည့်အတွက် အသားအရေကို ပိုမိုချောမွေ့စေပြီး ဝင်းမွတ်တောက်ပစေသည်။ ယခုပစ္စည်းအား Shop.com.mm Online Shopping Mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Flawless White Whitening Expert BB+ Cream - 25g